Iibiyaha Cable-ka ugu Fiican Shiinaha | Noyafa
NOYAFA Elektroonig ah oo ku takhasusay qalabka tijaabinta iyo fiilooyinka tijaabiyaha muddo 15 sano ah
Tijaabada Cable-ka ee Multifunction
Tijaabada Cable-ka ee Lcd
Tijaabada Dhererka Cable-ka
Tijaabaha Cable Network
Tijaabada Joogtada Cable
Rj11 Rj45 Cable Tijaabaha
Soo hel fiilada
Goobta Siliga Dhulka Hoostiisa
Baaraha Siliga Dhulka Hoostiisa
Qalabka Fiber Optic
Mitirka Korontada indhaha
Multimeter Fiber Optical
Tijaabaha kamarada Ipc
Qalabka lagu cabbiro
Baadhaha Xiritaanka Tubooyinka
Scanner Wall Stud
Aan La Xiriirin Ac Voltage Detector
Cabbirka Goobta Fog
Mitirka Fogaanta Laser
Helitaanka Range Laser
Khabiirkaaga fiilooyinka ayaa fahmay waxaad u baahan tahay
Shenzhen Noyafa Electronic Co., Ltd waxay ku takhasustay qalabka tijaabinta iyo tijaabiyaasha fiilada 15 sano
oo leh waayo-aragnimo ODM / OEM qani ah oo loogu talagalay noocyo badan oo caan ah oo adduunka oo dhan ah!
Alaabadayada ugu muhiimsan: Tracker Wire, Tijaabada fiilada LCD, Tijaabada dhererka fiilada, Tijaabada CCTV, Tijaabada siliga dhulka hoostiisa, Soo-helayaasha kala duwan ee Laser iyo aaladaha kale ee tijaabada.
Tijaabaha dhererka fiilada LCD ee ugu wanaagsan NOYAFA multifunction FactoryPrice-NOYAFA
NF-868 Astaamaha:1. Tijaabi fur furan, gaaban, iskutallaab, isku xirka gadaal iyo meelaynta siliga jaban.2. Awood u leh inuu cabbiro dhererka fiilada shabakadda, fiilada coaxial, fiilada taleefanka iyo fiilada USB.3. Si aad si degdeg ah u hesho silig bartilmaameedka ama fiilada ka mid ah noocyada fiilooyinka.4. Ka-hortagga faragelinta marka la raadinayo fiilada beddelka ama Router-ka. 5. Laba nooc oo iskaan ah: beddelka caadiga ah /PoE Switch. 6. Hawlaha kaydinta iyo xusuusta ee xogta cabbirka.7. Korontada dib u dhigista tooska ah ee daminta iyo shaqada iftiinka dambe.
NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M ee fiilada lan
NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M oo loogu talagalay lan cableOverviewNF-8108M waa tijaabiye fiilada shabakadeed, kaas oo ka kooban tijaabiye (NF-8108), iyo 8pcs aqoonsi fog. Waxa ay hubin kartaa khaladka fiilooyinka STP/UTP, cabbir dhererka fiilada lan. .Waxay si weyn u khusaysaa shabakada kombuyuutarka iyo qaybaha kale.
Noyafa dhulka hoostiisa hawl fudud hawl Multi function NF-820 cable goobeeyaha
Astaamaha ugu muhiimsan: Ogow meesha fiilada dhulka hoostiisa ah ama fiil kale oo aan la arki karin, cabbirkiisu waa 0-2m. ● Dareenka ishaarada gudbiyaha iyo qaataha waa la hagaajin karaa. (0-2m) ● Si fudud loola socdo iyada oo dhammaystiran Diidmada Faragelinta AC ● raadraaca raadraaca fiilada tooska ah Taleefoonka dhegtu waxa uu caawiyaa in lagu shaqeeyo jawi buuq badan
NOYAFA NF-8209 LCD Bandhig Cabbirka Dhererka Lan Cable POE Wire Checker Cat5 Cat6 Lan Test Network Tool Scan Cable Wiremap Tijaabaha
Sharaxaada badeecada:NF-8209 waa jiil cusub oo bixiya calaamada dhijitaalka ah iyo analooga oo dhan hal toner iyo baaritaan shabakad. Waxay leedahay saddex qaab oo loogu talagalay in lagu raad raaco fiilada sida qaabka dhijitaalka ah, qaabka analooga ah iyo qaabka PoE. Taasi waxay ka dhigan tahay inay ku qalabaysan tahay tignoolajiyada goobta ugu awoodda badan ee fiilada ee jawi kasta oo shaqo. Sidoo kale, waxaa ka mid ah cabbirka dhererka fiilada, baaritaanka cilladaha fiilada, Tijaabada PoE, hub blink iyo function NCV, kuwaas oo dhan waxay ka dhigayaan qalab loogu talagalay injineerada fiilooyinka. Hawlaha Alaabta1. CONT-- Tijaabi furan, gaaban, iskutallaab, ect STP, cable UTP.2. Dhererka - cabbir dhererka fiilada lan, baaxadda waa 2.5m ~ 200m.3. Scan--Analog/Digital/PoE mode si loo helo xadhkaha lan.4. PoE-- diyaar u ah beddelka PoE-ga caadiga ah ama kuwa aan caadiga ahayn (5~60V), aqoonso AT ama AF heerka nooca PSE. 5. Fiish--ku hel dekedda shabkada ee dakadda ifaysa ee shideeyaha/ router-ka. Xidhmada ay ka mid yihiin: gudbiyaha 1pc
Haddii aadan heli karin wax alaab ah oo ka baxsan shelf-ka oo ku habboon mashruucaaga, isku day caawimada adeegga habaynta xirfadeed ee NOYAFA.
Noyafa waxa uu leeyahay khabiir R&Waaxda D oo ay ku jiraan software& injineerada qalabka, injineerada caaryada. sidaas darteed, ODM& Adeegyada OEM waa la aqbali karo anaga. Guud ahaan, macaamiishu waxay jeclaan lahaayeen inay ku beddelaan Logogooda shayga shayga ama summada, sanduuqa midabka, buug-gacmeedka isticmaale, ama kartoonnada.
Macaamiisha qaarkood, waxay wali u baahan yihiin inay ku baraan luuqado kala duwan aaladaha, sida Germany, Polish, Russian, Turkish, Korea, iwm Sida soo saaraha fiilada tijaabiyaha, tijaabiyaha fiilada noyafa, ku guulayso kalsoonida macmiilka alaab wanaagsan.
Aqbal dalabaadka OEM iyo ODM ee leh R& Kooxda D iyo kooxda adeegga iibka kadib.
Xakamaynta qiimaha, oo aan ka badnayn miisaaniyada, waxay ka dhigtaa alaabada mid tartan badan suuqa.
Alaab kasta oo aan soo saarno waxay dhaaftay kormeerka tayada, daboolay baahiyaha.
Aagga warshadaha gaarka ah
Our "habka Nuux" aagga warshadaha ayaa ka badan 20000 mitir oo laba jibbaaran.
Maskaxdaada Ma Tihid
Waxaan bixinay adeegga OEM/ODM wax soo saarka muddo 25 sano ah. Si kasta oo ay shuruudahaagu yihiin, aqoontayada iyo waayo-aragnimadayada ballaadhan ayaa kuu xaqiijinaysa natiijo lagu qanco. Waxaan bixinaa dadaalkayaga ugu badan si aan u bixino adeeg tayo wanaagsan, qanacsan, qiimo tartan ah, gaarsiinta waqtiga loogu talagalay macaamiisheena qiimaha leh.
KU SAABSAN NOYAFA
Dhammaantood waxaa loo soo saaray si waafaqsan heerarka caalamiga ah ee ugu adag. Badeecadahayadu waxay raalli ka noqdeen suuqyada gudaha iyo dibaddaba. Waxay hadda si ballaaran u dhoofinayaan 200 oo waddan.
SHENZHEN NOYAFA TECHNOLOGY CO., LIMITED waa soo saaraha qalabyada tijaabinta ee beerta fiilooyinka ee Shenzhen, Shiinaha.
Waxaan ku takhasusay cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta tijaabinta shabakada isgaarsiinta, fiilooyinka isku dhafan iyo alaabta qalabka. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa Tracker Wire, Tijaabada fiilada LCD, Tijaabada Dhererka Cable, Tijaabada Kormeeraha CCTV, Hubiyaha POE, Goobta Siliga Dhulka hoostiisa, Kala duwanaanshaha Laser finder iyo qalab kale oo tijaabo ah.
Ka dib 15 sano oo horumarineed, waxaan abuurnay khibrad badan oo iibka iyo kooxda adeegga iibka kadib. Soo-saareyaasha iyo isticmaalayaasha qaabeynta sumcad aad u sareysa. Waqtigan xaadirka ah, alaabtayada waxaa loo dhoofiyaa adduunka oo dhan, gaar ahaan Yurub, Aasiya. Meel kasta ama mar kasta, macaamiishu ku qancaan ayaa ah raadinta weligeed ah iyo yoolkeena.
Waqtigan xaadirka ah, alaabadayada waxaa loo dhoofiyaa adduunka oo dhan, gaar ahaan Yurub, Aasiya. Meel kasta ama goorta, macaamiisha ku qanacsan waa raadinta weligeed ah iyo yoolkayaga.
Sawir kooxeedka macaamiisha
Noyafa waxa ay wada shaqayn dheer iyo wanaag la samaynaysay Prokit's Industries Co., LTD ilaa 2012. Iibka sanadlaha ahi waa 500 milyan USD, inta badan la keeno fiilada tijaabiyaha, fiilada goobiyaha iyo raadiyaha siliga dhulka hoostiisa.AmazonAmazon waa mid ka mid ah shuraakada muhiimka ah ee Noyafa. Waxaan leenahay qaybiyayaal badan oo Amazon ah. Taxanaha alaabada waxaa ka mid ah goobiyaha siliga dhulka hoostiisa, fiilada tijaabada, jeegaga fiilada PoE, sheyga siliga, kalaafiyaha laysarka. Iibiyaha ugu sarreeya waa NF-8209, NF-8601S iyo NF-488, iibka sannadlaha ah wuxuu gaari karaa 6 milyan USD sannadkii. Mobile Tele Systems (MTS) Waxaan aasaasnay ​​iskaashi dheer & si fiican Mobile Tele Systems ee Russia tan iyo 2013. Inta badan waxaan bixinay Tijaabada fiilada TDR lan, goobiyaha siliga shabakada, qalabka wax sheega dhulka hoostiisa iwm iyo tracker siliga dhulka hoostiisa.
Fiidiyowga tijaabada ah ee loo furayo tijaabiyaha fiilada badan ee Noyafa NF-8601W Fiidiyowga tijaabada ah ee macmiilkayaga
Sida mid ka mid ah iibiyeyaasha ugu sarreeya ee ka mid ah dhammaan noocyada alaabta. NF-8601W waxay ku guulaysataa taageereyaal badan oo ka kala yimid aduunka dacaladeeda oo dhan isticmaalka la taaban karo, qiimo jaban iyo tayo la isku halayn karo. Waxay tijaabin kartaa sii wadida fiilada, dhererka fiilada, meesha fiilada, sidoo kale waxay tijaabin kartaa PoE iyo PING. Iyada oo 8 remotes ay tijaabin karaan 8 fiilooyinka hal mar ka dibna kaa caawin doona hagaajinta hufnaanta shaqada. Si loo hagaajiyo tayada alaabta our, Noyafa had iyo jeer isku dayaya waxa ugu fiican in la ururiyo dhammaan inf alaabta iyo shuruudaha macaamiisha adduunka oo dhan, iyadoo ay taageerayaan waxaan ku sii wadi kartaa on dhaqaaqo.
HADDII AAD SU'AAL AH HAYSID, NOO SOO QOR
Xuquuqda daabacaadda © 2022 SHENZHEN NOYAFA ELECTRONIC CO., LIMITED - www.noyafa.net Dhammaan Xuquuqaha way xifdisan yihiin.